Rivo-doza any Japon
Ny lakandrano amin'ny fiteny japoney dia mitovitovy amin'ny "taki", izay midika ara-bakiteny hoe "dragona rano". Amin'ny alalan'io zavaboary mahagaga io, izay niainan'ny Japoney nandritra ny taona maro, dia nahafantatra ny onin'ny rano nianjera tamin'ny haavony lehibe niaraka tamin'ireo klioban'ny ditra sy ny feo mahery.
Any Japon dia misy rivo-doza mahery maherin'ny 2 miliara ka hatramin'ny 5 m fara fahakeliny. Hahita sary misy ireo onja malaza indrindra any Japana eto ambany ianao.
Ny riandrano avo indrindra
Ireo riandrano telo mahavariana indrindra dia toy izao manaraka izao:
Hannock no rivo-doza avo indrindra ao amin'ny firenena sy Azia rehetra. Any amin'ny prefektioran'i Toyama, ny "dragona rano" dia manana 497 m ny haavony ary izy no 88 amin'ireo eo amin'ny haavon'ny haavon'ny rano. Na eo aza izany, ny toetrany voalohany any Japon dia tena fepetra. Izany dia hazavaina amin'ny hoe i Hannoki dia mbola mavitrika mandritra ny 4 volana monja isan-taona: hatramin'ny Aprily ka hatramin'ny volana jolay, rehefa miala ny ranomandry eny an-tendrombohitra Midagahara.
Seven Daky no renirano faharoa avo indrindra any Japana. Ny halavany dia 370 m. Ny anarana hoe Simeo dia midika ara-bakiteny hoe "fampakarana". Ho an'ny Japoney, ny feon'ny ranomamy dia mitovitovy amin'ny feo avoakan'ny mônika iray ao amin'ny vavaka ho an'ny Bouddha. Simeo Dacians dia antsoina koa hoe kambana amin'i Hannock, satria samy mianjera amin'ny renirano iray ireo onja ireo, ary manandratra ny litera latinina ny rano.
Hagoromo-fa - ny rivo-doza fahatelo indrindra any Japon (270 m), iray amin'ireo toerana malaza indrindra any amin'ny nosy Hokkaido. 7 dingana Hagoromo-nefa mbola mampahatsiahy ny dihy Japoney "maivana ravina", izay heverina ho mpiaro ny varyinganam-bary.
Ny riandrano tsara indrindra
Mazava ho azy, ity sehatra ity dia misy fepetra, saingy ny Japoney tenany ao anatin'ity sokajy ity dia ahitana ireto riandrano manaraka ireto:
Nati, fa mbola - ny renirano, miorina eo amin'ny nosin'i Kia, any amin'ny prefektan'i Japana Wakayama. Ny haavony dia 133 metatra ny haavon'ny rano, ary misy rano 10 metatra eo an-tongotra. Fiangonana roa no naorina teo akaikin'ny Nati: Hiro-jinja - Tempolin'i Shinto sy Seiganto-ji - Tempolin'ny Buddhist, izay ahitana toerana malalaka ho an'ny mpizaha tany. Ny fipoahana lehibe indrindra amin'ireo mpizahatany any Japana akaikin'ny reniranon'i Naty dia ny 14 jolay no fetibe - ny fetiben'ny afo, izay toerana tsara indrindra manadio ny afo amin'ny lalana mankany amin'ny renirano.
Kagon no renirano malaza indrindra any Japana, voarakitra ao amin'ny lisitry ny UNESCO. Ao amin'ny Valan-java-pirenena Nikko any Japon , ny riandrano Kagon dia 101 m ambony. Amin'ny fanampiana ny fiakarana manokana ho an'ny saram-pidiovana kely, i Cagon dia azo jerena akaiky. Ary rehefa mankafy ilay hatsarana dia mitsidiha ny trano fisakafoanana eo am-pototry ny riandrano. Amin'ny ririnina (novambra-martsa) Kegon no manala sy maneho endrika tontolon'ny lolo vavy izay tsy mamela na oviana na oviana.
Fukuroda-saingy - ny riandrano mahafinaritra indrindra ao amin'ny prefektioran'i Ibaraki. Ny endriny dia ny firafiny: Fukuroda dia misy vatokely vato, ary ny rano mikoriana eo amin'izy ireo dia farihy kely. Amin'ny ririnina, mangatsiaka ny rano sy ny rano. Ho an'ireo mpizahatany, ireo injeniera Japoney amin'ny vatolampy dia nanangana elefato iray, izay ahafahanao mitraka mankany amin'ny ambaratonga ambony ao Fukuroda ary mankafy ny fijerin'ny rano tafidina avy any ambony.
Ririnina tsy mahazatra
Ity sokajy ity dia ahitana ireto zavatra manaraka ireto:
Furape-saingy - ny tena mampiavaka azy dia tsy misy vatana rano manakaiky, avy aiza no mety hameno ny riandrano. Miala amin'ny tany ny fiaramanidina ary mianjera ao anaty renirano maromaro, dia mianjera eny an-tendrombohitra. Misy ny Furape ary ny faharoa dia ny ranomason'ny Maiden.
Camuyvaca koa dia rian-drano mikoriana , izay loharano izay loharano mafana ambanin'ny tany . Eo amin'ny ambaratongan'ny rian-drano dia mamorona farihy, ary ny ambany dia ny dingana, ny cooler ny rano. Etsy andanin'izany, ny rano ao Kamuyvakka dia heverina ho fitsangatsanganana, ary faly ny Japoney mandray ny fandroana ao amin'ny vatana mangatsiaka.
Sönjüdo no renirano lehibe indrindra any Japon, any amin'ny iray amin'ireo lava-bato ao Gifu Prefecture.
Ireo rano rehetra voalaza etsy ambony dia avy amin'ny natiora voajanahary. Fa ny Japoney dia tia rano mangatsiaka ka mampitombo ny isany, manamboatra riandrano kanto any amin'ny toeram-pitsangatsangana ary na ireo foibe fivarotana aza.
Kambodza - manidina
Ny moske any Indonezia
Fialantsasatra any Malezia
Myanmar - fialan-tsasatra
Fitaterana an'i Laos
Fialantsasatra any Laos
Ireo zoro any Korea Atsimo
Voninkazo mainty sy fotsy
Adin'ny hafanana - soritr'aretina amin'ny ankizy
Ny fihinanana ranomandry
Bola tsara tarehy - sary avy amin'ny hevitra tsara indrindra ho an'ny famolavolana
Tsiforal - antibiotika manohitra ny cystitis
Amin'ny inona no hosoloina sultana?
Ny tratra dia maratra mialoha ny isam-bolana
Voahirana i Ryan Philip
Diabetes mellitus mahatonga
Ho fiarovana an'i Johnny Depp dia hijoro ho vavolombelona amin'ny olona efatra amby roapolo
Tendrombohitra Maung Terevaka
Ny atin'ny efitrano ho an'ilay zazalahy - hevitra vaovao mamorona
Fikarakarana sy fitazonana sokatra vaventy mena
30 sary avy amin'ireo kintan'i Hollywood izay mandresy lahatra fa tsy ny olo-malaza rehetra no tsara tarehy
Akanjo nasionalin'i Kaokazy
Mafana fo maimaim-poana ho an'ny tokantrano
Sofa fotsy fotsy - vahaolana mirindra tsara ho an'ny trano anatiny